Gobolka Waqooyi Bari Kenya oo galay xaalad go’doon ah – Hornafrik Media Network
Soomaalida ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay roobka Deyrta oo ka da’ay qeybo badan oo ka mid ah gobolkaas.
Dadka ku nool magaalooyinka Gaarisa, Mandheera iyo Wajeer ayaa xilligaan wajahaya xaalad nololeed oo aad u adag, kadib markii daadad kasoo rogmaday roobkaas ay burbur baaxad leh u geysteen waddooyinka soo gala gobolka.
Gaadiid doonaya in uu gudaha u galo magaalooyinkaas oo sida shixnado kala duwan ayaa maalmo ku xayiran xadka uu gobolkaasi la wadaago gobolada kale ee dalka Kenya, madaama ay roobabkii da’ay burburiyeen waddooyinkii muhiimka ahaa.
Dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa cabasho ka muujinaya jid la’anta soo wajahday , iyaga oo baaq u diray dowladda iyo cid kasta oo ka caawi karta bur burka ku yimid waddooyinkii ay ku kala gooshi jireen.
Sawirro laga soo qaaday Geel maalmo badan ku go’doonsanaa qeybo ka mid ah gobolka ayaa lagu baahiyay baraha ay bulshadu ku xariirto, Geelaas oo ka mid ah xoolaha ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa la arkayay isaga oo ku dhex jira dhiiqo qarisay intiisa badan oo uu ka bixi la’yahay, taas oo uu maalmo ku jiray sida ay noo sheegeen dadka ku nool qeybo ka mid ah gobolkaas.
Axmed Madoobe oo digniin u jeediyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulkiisa